लकडाउन कहिले खुल्ला ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला.. लकडाउन कथा
लकडाउन कहिले खुल्ला ?
३१ बैशाख २०७७, बुधबार २२:४७
जाँच सकेर मामाघर नुवाकोट जाने भनेर मामु-बाबाले भन्नुहुन्थ्यो । उहाँहरू दुवै जना अफिस जानुहुन्छ । अनि म घरमा एक्लै पर्छु । त्यसैले मलाई मामाघरमा मेरो पुकु भाइसँगै ठूलमामुले लगिदिने भन्नुभएको थियो । मलाई कहिले जाँच सकिएला र स्कूलको छुट्टी होला भन्ने लागिरहेको थियो । भर्खर जन्मिएकी मेरो अर्को ठूलमामुको छोरी, मेरो बहिनी पनि मामाघर आएका छन् रे । उनीहरूलाई कहिले भेटौँ जस्तो भएको थियो । हुन त म पहिला पनि नयाँ क्लास जानुभन्दा अगाडि हुने यस्तै छुट्टीमा मामाघर जाने गर्थें तर यसपालि चैं दुई जना नयाँ बहिनीहरूसँग भेट हुने थियो मामाघरमा । त्यही भएर भाइ र मलाई मामाघर कहिले पुगौँ जस्तो भएको थियो ।
यसपालि स्कूल जाँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर घरमा सबैले अनि स्कूलमा टिचरहरूले भनिराख्नुहुन्थ्यो । पहिला पहिला स्कूल बसमा मास्क लगाउनुपर्दैन थियो तर अहिले मास्क भुल्यो भने मामुले कराउनुहुन्थ्यो । अनि बाबाले स्यानिटाइजर ल्याइदिनुभएको थियो स्कूलमा, स्कूल बसमा हुँदा हातमा लगाउन । कोरोना भाइरसले गर्दा यस्तो गर्नुपरेको भन्नुहुन्थ्यो घरमा पनि स्कूलमा पनि सबै जनाले ।
मामु–बाबा हाम्रो जाँच कहिले सकिने हो भन्नुहुन्थ्यो । कोरोना डरलाग्दो रोग हो भनेको सुनेको थिएँ । नभन्दै हाम्रो स्कूलमा अन्तिम दिनको आर्टको जाँचै भएन, स्कूल बिदा भयो । अहिलेसम्म यसरी कुनै विषयको जाँच नदिएको थाहा थिएन मलाई ।
स्कूल छुट्टी भएपछि मामु–बाबा पनि केही खुसी हुनुभयो । काका, आन्टी, बहिनी, सञ्जीव काका, सोना निनी, सुवास काका घरका प्राय: सबै जना नुवाकोटको हाम्रो घर जानुभयो । बन्द हुन्छ रे भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुवास काकाले । मलाई पनि उहाँहरूसँगै जाने मन थियो तर मामु–बाबाले पठाउनुभएन । उहाँहरूले मलाई अरू कसैसँग पठाउनुहुन्न । मलाई रिस उठ्यो । नुवाकोट जान कस्तो मन थियो । धेरै दिन छुट्टी हुन्छ । म के गरेर बस्नु ? मामु–बाबा त अफिस जानुहुन्छ । त्यसपछि म कोसँग बस्नु दिनभर घरमा भनेर मलाई फेरि दिक्क लाग्यो । मेरो पो स्कूल छुट्टी भयो त अरूको त हुन्न ।
मलाई पुकु भाइको घरमा भने लगिदिनुहुन्छ । शनिबार जाने भन्नुभयो मामुले । त्यतिञ्जेल घरमा म कोसँग बस्नु भनेको त धन्न निनीको पनि मेरो जस्तै छुट्टी भएछ । निनी र मेरो प्राय: उस्तै उस्तै बार छुट्टी हुन्छ । मेरो स्कूल पनि शनिबार र आइतबार छुट्टी हुन्छ । उहाँको पनि शनिबार र आइतबार छुट्टी हुन्छ । मलाई अरूसँग भन्दा निनीसँग घरमा बस्न मन पर्छ किनकि उहाँ मसँग खेल्नुहुन्छ, आर्ट गर्नुहुन्छ, नाँच्न नआए पनि नाँच्नुहुन्छ । त्यसैले, म उहाँको साथी उहाँ मेरो साथी । हामी दुवैको छुट्टी भएपछि भइगो भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ । घरमै भए पनि उहाँले घरबाटै काम गर्नुपर्ने रे ! अनि मैले टिभी हेरेर दिन काट्नुपर्ने भयो ।
मलाई ब्याडमिन्टन जस्तो बाहिर खेल्ने खेल खेल्न मन थियो यो बिदामा । कत्ति हेर्नु टिभी मोबाइल ! कहिलेकाहीँ उहाँ एक-एकछिन ब्रेक टाइम भन्दै मसँग खेल्न आउनुहुन्थ्यो । म खुसी हुन्थें ।
हाम्रो स्कूल छुट्टी भएपछिको आइतबार मलाई किन हो साह्रै डर लाग्यो । बाबाले समाचार लगाउँदा कोरोना भाइरसले धेरै देशमा कति धेरै मान्छे मरेको समाचार सुनेको थिएँ । हाम्रो देशमा पनि आयो भन्ने सुनेकी थिएँ । टिभीमा घरमै बस्नु, बाहिर धेरै ननिस्किनु भनिराखेको छ । तर बाबा-मामु अनि बुबाले अफिस जानुपर्छ ।
म डराएको कुरा निनीले थाहा पाउनु भएछ । उहाँले मलाई त्यस्तो केही हुन्न भनेर सम्झाउनुभयो । अनि ‘बम बम भोले’ भन्ने फिल्म देखाउनुभयो । राम्रो रहेछ । मैले डर भुलेछु । त्यसको भोलिपल्टदेखि त सबैको अफिस बन्द, अझ काठमाडौं नै बन्द भयो रे । गाडी पनि नचल्ने, पसल पनि नखुल्ने । मामु-बाबा, बुबा पनि घरमै बस्ने हुनुभयो । यो त राम्रै भयो तर मैले मेरो पुकु भाइ भएको ठाउँमा जान पाइनँ । मलाई नराम्रो लाग्यो ।
हाम्रो एउटा फ्यामिली ग्रुप छ मेसेन्जरमा । त्यसमा पुकु भाइ अनि सानी, ठूली मामु, मामा, आमा, बा सबैले एकै पटक भिडियो कल गर्‍यौँ, म त्यहीँ बोलें । एक दुई दिन त रमाइलो लाग्या थियो । पछि मलाई अल्छी लाग्यो भिडियो कलमा बोल्न पनि । साँच्चि नै भेटेको जस्तो हुँदैन नि त ।
दिन बित्दै गएपछि मलाई स्कूलको याद आयो । स्कूलमा खेलेको, कुदेको । मेरो बेस्ट फ्रेण्ड साराको याद आयो । ऊ विशालनगरमा बस्छ । उसलाई पनि मेरो याद आयो रे । उसको मबाहेक अरू कोही साथी छैन नि त । उसको मामुले भिडियो कल गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी दिनभर त्यही खेल्थ्यौं । मेसेन्जरमा खेल्न मिल्छ नि त । हामी गफ गर्नुभन्दा पनि धेरै खेल्थ्यौं । रमाइलो हुन्थ्यो तर घरीघरी नेट स्लो भएर रिस उठ्थ्यो ।
मलाई आर्ट गर्न एकदम मन पर्छ । त्यही भएर होला मलाई बाबाले आर्ट गर्ने सामान ल्याइदिनुभयोः कलर, स्केच पेपर, काठको आर्ट गर्ने कुरा सबै । बाबा मेरो लागि स्यान्टा हो । मलाई चाहिएको जे कुरा पनि ल्याइदिई हाल्नुहुन्छ । भन्नै पर्दैन । मैले पहिलो स्केच मेरो बेस्ट फ्रेण्ड साराको बनाएँ । म घरीघरी छतमा गएर सारा भनेर चिच्च्याउँथे सुन्छ कि भनेर तर मैले मनमैजुबाट चिच्च्याएको उसले विशालनगरमा सुनेन होला ।
अब मलाई रमाइलो लाग्न थाल्यो शनिबारबाहेक कोही नभेटिने हाम्रो घरमा अहिले सबै घरमै हुन्थे । अरू बेला त शनिबार पनि घरी पार्क घरी कहाँ जानुपर्थ्यो । मलाई भने घरमै बसेर खेल्ने रहर हुन्थ्यो । त्यो रहर पूरा भएको थिएन । कहिले कसको समय नमिल्ने कहिले कसको । यो पालि भने सबैको समय मिल्यो ।
खाना खाएपछि बाबा-मामु र म छतमा गएर घाम ताप्थ्यौँ, निनी भने उहाँकै कोठामा ल्यापटपमा केके गर्नुहुन्थ्यो । म गएँ भने ‘अहिले म काम गर्दैछु यति बजे ब्रेक टाइम अनि खेल्नुपर्छ । डोन डिस्टर्ब अहिले’ भन्नुहुन्थ्यो । मलाई रिस उठ्थ्यो । अनि म निनीको ढोकाबाहिर बसिरहन्थेँ । बेलाबेलामा ‘भएन खेल्ने टाइम ?’ भन्थेँ‌ । मामु-बाबा मसँग निनी जस्तो धेरै खेल्नुहुन्नथ्यो नि त । निनीलाई फकाउन म हजुर मोटी भइसक्यो घर बसेर एक्सरसाइज गर्नुपर्छ भनेर बिहान बिहान छतमा लान्थेँ । हामी स्किप खेल्थ्यौं, रिङ खेल्थ्यौं, ब्याडमिन्टन खेल्थ्यौं । फिल्म हेर्दै खाना खान्थ्यौं ।
‘बम बम भोले’ मलाई सबैभन्दा मन पर्ने थियो । त्यो फिल्म मैले १४ पटक भन्दा धेरै हेरें यो बिदामा । मलाई त्यो फिल्मको ‘रिमझिम’ भन्ने केटी मन पर्थ्यो । म जत्रै थियो तर उसको जुत्ता थिएन । मलाई उसलाई भेटेर जुत्ता दिन मन लाग्यो । मसँग त कति धेरै जुत्ता छ नि त । मलाई पहिलो पटक थाहा भयो रिमझिमको जस्तै कति धेरैको जुत्ता हुन्न भन्ने ।
निनीले भन्नुभयो, देख्यौ सबै जनाको जीवन हाम्रो जस्तो हुँदैन, त्यही भएर एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यही बेला बाबाले समाचार लाउँदा टिभीमा देखेको थिएँ धेरै जना चप्पल लागाएरै टाढाटाढा हिँडेर गएको । कोही त बोल्दाबोल्दै रुनुहुन्थ्यो । अनि कसैकसैले सहयोग पनि गर्नुभयो रे । त्यो देख्दा मलाई पनि रुन मन लाग्थ्यो गाडी किन नचलेको होला भनेर । विचरा उनीहरूसँग खानेकुरा छैन रे । अनि कसैको घर पनि छैन रे काठमाडौंमा भन्थ्यो । अनि हाम्रो जस्तै गाउँको घर जान हिँडेको रे । नुवाकोटको मेरो घर जान गाडीमा तीन घण्टा लाग्छ । उनीहरूलाई हिँडेर घर पुग्न कति दिन लाग्दो होला । बाबा-मामुले पनि विचरा भनेको सुन्थें ।
मलाई खासमा समाचार हेर्न मन पर्दैन तर बाबले हेर्नुहुन्थ्यो । म पनि उहाँहरूसँगै हुने भएकोले हेर्थें ।समाचार हेरेर धेरै कुराहरू थाहा हुने रहेछ । समाचारमा नपाएका, चप्पल लाएर घर जान हिँडेका मान्छे मात्र हेर्दिन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीका कुरा पनि सुन्छु । मैले उनको चित्र पनि बनाएको छु ।
‘बम बम भोले’ बाहेक मैले ‘चिल्लर पार्टी’ पनि हेरें । त्यो पनि मलाई खुब मन पर्‍यो । त्योचैं मैले पाँच पटक जति हेरें निनीको ल्यापटपमा । मलाई हलमा धेरै मान्छेहरूसँग बसेर भन्दा निनीको ल्यापटपमै फिल्म हेर्न मन पर्‍यो । अल्छी लाग्यो भने फास्ट गरेर हेर्न पनि मिल्ने, आफूलाई मन परेको सिन मात्र हेर्न पनि मिल्ने । अनि दोहोर्‍याई-तेहर्‍याई हेर्न पनि मिल्ने । यो फिल्ममा चैं हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तै एक जना हुनुहुन्थ्यो । निनीले खै नेता भन्नुहुन्थ्यो । साह्रै नराम्रो हुनुहुन्थो । सबै बच्चाहरूलाई दुख दिइराख्ने अनि कुकुरलाई देखी नसहने । यहाँ हाम्रो टोलमा पनि सडकका कुकुरहरूलाई ठूलो मान्छेहरूले पिटेर लखेट्छन् । त्यस्तो देख्दा मलाई रुन मन लाग्छ । ठूला मान्छेहरू किन यस्त भएका होलान् जस्तो लाग्छ । हाम्रो छिमेकमा सृजना निनी हुनुहुन्छ । उहाँचाहिँ सबै कुकुरहरूलाई बिस्किट, माम दिंदै हिँड्नुहुन्छ । उहाँलाई धेरै कुकुरले पिछा गर्छ । मलाई त उहाँ कुकुरहरूको मामु जस्तै लाग्छ । एक पटक मैले पनि उहाँसँगै गएर कुकुरलाई बिस्किट दिएँ । मलाई कस्तो खुसी लाग्यो ।
मेरो निनीलाई सनराइज, आकाश अनि चरा हेर्न सार्है राम्रो लाग्छ । म पनि आजकल निनीसँगै चरा उडेको हेर्छु । सनराइज, सनसेट हेर्छु । फोटोमा भन्दा पनि राम्रो देखिंदो रहेछ । जुमा देखेको भन्दा पनि राम्रो । अनि निनीले चराको आवाज सुन त ध्यान दिएर भन्नुहुन्छ । हामी त्यो पनि सुन्छौं । कस्तो रमाइलो हुन्छ |
कोरोना भाइरसबाट बच्न मिचिमिची हात धुने भनेको भन्यै गर्थ्यो निनीको एफ.एम.ले । म पनि मिचिमिची हात धुन्थेँ । त्यसरी हात धुँदा धुँदा बबल बनाउथें । दुई-तीन दिनपछि त कत्रो ठूलो ठूलो बबल बनाउन थालें । निनी दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो । अनि भिडियो खिच्नुहुन्थ्यो । मलाई त बबल किन्न मात्र पाइन्छ जस्तो लाग्थ्यो । आफैं पनि बन्दो रहेछ भनेर बल्ल थाहा पाएँ ।
मैले बबल बनाउन सिकेको ‘बम बम भोले’ फिल्म हेरेर हो । एफ.एम.ले घरमै बस्नु, बाहिर ननिस्किनु पनि भन्छ । त्यसैले होला घरबाट कोही निस्किन्न । छतछतबाटै कुरा गर्छन् । मेरो बाबा र बुबाचैं अल्छी लाग्यो भनेर घरीघरी निस्किरहनुहुन्छ । कसैले भनेको नि मान्नुहुन्न । बाबालाई त साथीहरू नभेटी नहुने रे । हामीलाई पनि त हाम्रो साथी भेट्न मन लाग्छ तर पनि हामी घरभित्रै बसेका छौं ज्ञानी भएर । ठूला मान्छेचैं ज्ञानी नहुने । मैले त सबैको ढोकामा ‘स्टे होम’ लेखेर टासिदिएँ तर पनि मान्नु हुन्न ।
हामी सिर्जना निनी र सिर्जना निनीको घरको कुकुर स्मोकीसँग झ्याल झ्यालबाटै कुरा गर्छौँ ।स्मोकीले पनि बुझिसक्यो अहिले त । मलाई झ्यालमा देख्ने बित्तिकै कुद्‍दै आएर गफ गर्छ ।
हामी बाहिर जान नपाउने अनि बाहिरको मान्छे आउन नपाउने कुराले अलि दिनपछि चिन्ता लाग्न थाल्यो । किनकि मेरो बर्थडे आउँदै थियो । पुकु भाइलाई कसरी भेट्ने, केक कसरी काट्ने, पसल खुलेन भने केक कहाँबाट ल्याउने भनेर । म फेरि दु:खी हुन थालें । सबैले वैशाख १७ सम्ममा त खुलि हाल्छ नि भन्थे तर लकडाउन फेरि थपियो ।
लकडाउन हाम्रोमा मात्र होइन सबै देशमा भएको रहेछ । चाइना, इन्डिया, अनि संगीता निनीको जापानमा । संगीता निनीले निनीलाई फोन गर्दा मसँग पनि बोल्नुहुन्थ्यो । अनि जापानमा पनि कोरोनाले सताएको छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि सबैतिर त्यस्तै रहेछ, हामीले घरमै बसेर कोरोनासँग लड्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो ।
त्यसपछि त लकडाउन हट्ला भनेको त झन् हाम्रो क्लास नै पो अनलाइनमा लिने भनेर मामुले सुनाउनुभयो । स्कूलको म्याम अनि साथीहरूसँग भेट्न पाइने भयो भनेर मलाई खुसी लाग्यो । अनलाइन क्लास एकदुई दिन त ठिकै लाग्यो तर पछि मन परेन । स्कूलमै गएर पढेको जस्तो नहुने रहेछ । क्लासरुममा खेल्दै, टिफिन खाँदै, हाँस्दै सँगै पढेको जस्तो नहुने रहेछ ।
निनीले नाटक हेरौं, बालबालिकाको कथा सुनौं, आऊ भन्नुहुन्थ्यो । मलाई मनै पर्दैनथ्यो । मलाई त कथा किताबमै पढ्न मन लाग्छ । फेसबुकमा भनेको कथा मलाई मन पर्दैनथ्यो । बरु आफूले जानेको कथा निनीलाई सुनाउन मन पर्थ्यो । हामीले कथा रेकर्ड पनि गरेका छौं ।
मेरो बर्थडे आयो । बाबाले कताकताबाट केक ल्याउनुभयो । हामीले घरमै खानेकुरा बनायौं, रमाइलो लाग्यो । मदर्स डेमा मैले युटुब हेरेर ओरियो केक पनि बनाएँ । आजकल म कालो चिया पनि बनाउँछु तर ग्यास बाल्नचैं आउँदैन । भाँडामा पानी, चियापत्ती र चिनी राखिदिन्छु । अनि मामु या निनीले बसाली दिनुहुन्छ । आफूले खाएको भाँडा आफैं माझ्छु । फूलमा पानी हाल्छु । घरको काममा अरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा मलाई रमाइलो लाग्छ । यो बिदामा समय धेरै भएर पनि होला धेरै कुरा सिकेँ ।
तर पनि मलाई लकडाउन मन परेको छैन । मलाई सारासँग भेट्न मन छ, खेल्न मन छ तर कसरी भेट्ने थाहा छैन । स्कूल जान मन छ । म टु क्लासमा जानुपर्थ्यो अहिले । तर स्कूल खुलेको छैन । मेरो पुकु भाइको हात भाँचिएको छ रे । उसलाई भेट्न पाएको छैन । सानुको नयाँ बहिनी एक पटक पनि हेर्न पाएको छैन फोटोमा बाहेक । उसले पनि त उसको ठूलो दिदी पनि छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । तर यो लकडाउनले गर्दा केही गर्न पाएको छैन । मलाई यी कुराचाहिँ मन परेको छैन । गाउँमा गएको बहिनी कस्तो मज्जाले बाहिर खेलिरहेको फोटो फेसबुकमा हेर्छु । हामीचैं काठमाडौंमा घरभित्र कोचिएका छौं । त्यही भएर पनि मलाई काठमाडौं मन पर्दैन । गाउँमा कस्तो फ्रि हुन्छ, यहाँ त जेल जस्तो । मामु-बाबा अनि निनीसँग समय बिताउन पाए पनि कहिले स्कूल जाने, मामाघर जाने, पुकुलाई भेट्ने, सारालाई भेट्ने भनेर पर्खिरहेकी छु ।
यो कथा पलिस्था श्रेष्ठसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर दीपज्योति श्रेष्ठले लेख्नु भएको हो ।
यस्तो दिन देख्नुपर्‍यो !
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १४:३५
लकडाउनमा परेको केरियाको सपना
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:४९
Total Visits: 18,441